10-ka barnaamij ee ugu wanaagsan cimilada ee Android | Androidsis
10ka barnaamij ee cimiladu ugu fiican tahay Android
Ignacio Sala | | Codsiyada Android
Ka hubi halkayaga barnaamijka cimilada Xaaladaha cimiladu maalinta waa wax caadi ah oo inbadan oo naga mid ah ay leeyihiin marka aan u kacno si aan u helno fikrad ah nooca dharka ama qalabka aan dooran karno inaan aadno si aan u aadno shaqo, dugsi sare, jaamacad, u adeegasho ama eyga lugee.
Si ka duwan macruufka, on Android ma hayno wax barnaamij ah oo waddani ah oo lagu baaro cimilada, sidaa darteed ilaa aynaan isticmaalno barnaamijka Google, waxaan ku qasban nahay inaan rakibno mid ka mid ah kumanaan codsiyada cimilada ah oo laga heli karo Play Store. Maqaalkani waxaan ku tusineynaa kuwa ugu fiican barnaamijyada cimilada ee loogu talagalay Android.
In kasta oo saadaasha hawadu heshay tiro badan oo horumar ah si loo saadaaliyo cimilada tobannaankii sano ee la soo dhaafay, illaa maantadan la joogo, weli waa sidii aan macquul aheyn in la saadaaliyo cimilada wixii ka dambeeya 3 maalmoodSidaa darteed, markaan dooranayno hal codsi ama mid kale, waa inaanan waligeen isku salayn cimilada ay sheegato inay saadaaliso, gaar ahaan xilliga qaboobaha, halkaas oo xaaladaha cimiladu aad ugu kala duwan yihiin.
Xilliga xagaaga, markaan ogaano inay roob kulushahay roobna aan la filayn dhawr bilood, codsiyada na siiya saadaasha hawada ee 3 maalmood ka badan, kaliya waxay xaqiijinayaan wax muuqda: waxay noqon doontaa kuleyl
Dhinac kale oo ay tahay inaan txisaabtanka ayaa ah isha laga helo xogta. Had iyo jeer waa la doorbidaa in la doorto codsi ilaha xogtiisa uu ka jiro dalkeena, AEMET waa isha rasmiga ah ee Spain.
Haddii aan sidoo kale dooneyno inaan helno ogeysiisyo ku saabsan isbeddelada lama filaanka ah ee waqtiga dhaca, waa inaan mid doorannaa codsi noo soo diraya ogeysiisyo, maadaama kale, waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan si joogto ah ula tashanno dalabka.
In kasta oo codsiyo badani na siinayaan macluumaad isku mid ah, haddana dhammaantood maahan kuwo na siiya noocyo kale oo macluumaad ah oo ku anfacaya shaqadeenna, howlahayaga firaaqada ee waqtigeenna firaaqada ah ... sida ay noqon karto waqtiga qorraxdu dhacdo ama soo baxdo, xawaaraha dabaysha o gobolka badda, haddii aan jeclaanno isboortiga biyaha, in kastoo tan loogu talagalay ay jiraan noocyo kale oo codsiyo ah.
Markii aan si cad u ogaanno nooca macluumaadka aan u baahannahay inaan doorano kaas oo ah ku dhaqanka waqtiga ugu habboon baahiyahayaga, waxaan sii wadaynaa inaan ku tusno kuwa ka mid ah, ka dib falanqayntayada, kuwaas oo ah barnaamijyada cimilada ugu wanaagsan ee Android. Sida ay u kala horreeyaan lama xiriirinayo inay ka fiicnaadaan ama ka liitaan inta kale.
2 Waqtiga AEMET
4 Waqtigu waa
5 Cimilada Yahoo
7 Weather Channel
9 Cimilo Xad dhaaf ah
10 Cimilada Karootada
Haddii baahiyahayagu ogaadaan waqtiga aad uma ballaaran oo waxaan kaliya xiiseyneynaa inaan ogaano heerkulka hadda jira, waxa uu sameyn doono maalinta oo dhan iyo haddii ay jirto suurta galnimada roob, muhiim ma ahan in loo baahdo codsiyo dhinac saddexaad ah, tan iyo markii loo adeegsado barnaamijka Google, iyada oo loo marayo xulashada Day View.
Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka (AEMET) waxay leedahay codsi u gaar ah oo loogu talagalay Android, codsi kaas ogeysiinayaa dhammaan ifafaalooyinka saadaasha hawada degmo kasta, oo ay ku jiraan ogeysiisyada rasmiga ah ee hay'adani.
Codsigan wuxuu na siinayaa saacadda saacadda saacad ilaa maalinta saddexaad ee in kabadan 8.000 oo degmooyin Spain oo dhan ah, waxaa ku jira sawirrada radar-ka laga helo dayax gacmeedyada, digniinta ifafaale xumada waxayna sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan ogaanno xaaladda xeebaha laba maalmood ka hor.
Waxay noo oggolaaneysaa inaan kaydinno goobo kala duwan, la wadaagno macluumaadka cimilada iyada oo loo marayo codsiyada farriinta iyo sidoo kale ay ku jiraan widget-yada cimilada shaashadda guriga ee aaladdayada oo na tusaysa saadaasha maalinlaha ah iyo illaa 5 maalmood ka hor.
Waqtiga AEMET waxay u baahan tahay nooca Android 4.4 si aad u awoodo inaad kala soo baxdo, codsi kor u dhaafay hal milyan oo dejin tan iyo markii uu yimid Play Store.
Clima Weather waa mid ka mid ah codsiyada dhameystiran oo aan ka heli karno Play Store, aad u dhameystiran oo mararka qaar jahwareer ku imaan karto adoo ku bixinaya macluumaad aad u tiro badan isla goobta. Codsigan waxaan ku ogaan karnaa oo keliya cimilada hadda jirta, laakiin sidoo kale saadaasha maalmaha soo socda, huurka iyo tayada hawada, wajiga dayaxa, xawaaraha waqtiga ...
Waxay noo ogolaaneysaa inaan ku darno goobo kala duwan, waxaa ka mid ah a radar-waqtiga dhabta ah taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan aragno sida xaaladaha cimiladu u kala duwan yihiin iyadoo la raad raacayo dhaqdhaqaaqa daruuraha iyo duufaanta ... Codsi wanaagsan oo dhanka cimilada ah, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku darno shaashadda guriga qalab isweydaarsi ku habboon oo leh saadaasha hawada maalin kasta, saacaddii oo waliba muujisa xaaladaha cimilada.
Clima Weather ayaa diyaar u ah adiga ku soo dejiso bilaash oo waxaa ku jira xayeysiis, xayeysiis aan ka takhalusi karno innagoo adeegsanayna iibsashada ku jirta app-ka ee ay na siiso oo leh qiimo dhan 3,39 euro. Nooca ugu yar ee Android ee lagu rakibo codsigan wax ka badan 1 milyan oo soo degsasho ah waa 4.2.
Cimilada - Cimilo
Developer: Saadaasha hawada & Qalabka & Radar
Ka dambeeya arjiga bilaashka ah ee leh xayeysiinta Eltiempo.es waa mid ka mid ah soo bandhigayaasha cimilada ee ugu caansan Spain: Mario Picazo. Codsigan wuxuu na siinayaa saadaasha saacad kasta ee saacadaha 14 maalmood in ka badan 500.000 oo goobood (garoomada diyaaradaha, iskuulada, xeebaha, koorsooyinka golf, garoomada kubada cagta ...).
Waxaa ka mid ah widget-ka cimilada taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan si deg deg ah u helno macluumaadka ugu muhiimsan ee saadaasha hawada sida heerkulka, dareenka kuleylka, xawaaraha dabaysha, cadaadiska jawiga, tayada hawada iyo sidoo kale heerarka manka ee gobolada.
Waxay kaloo na siisaa macluumaad ku saabsan xeebaha 12ka dhul xeebeed ee Isbaanishka ugu waaweyn. Waxay sidoo kale na siisaa macluumaadka cimilada ee Yurub waxaana ka mid ah digniinta cimilada ee Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka (AEMET).
Codsiga waxaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash waxaana ka mid ah xayeysiisyada, xayeysiisyada aanan sinnaba uga saari karin iibsiga-app-ka sidii haddii ay ku jiraan barnaamijyo kale oo noocan ah.
Si aad ugu raaxaysato codsigan in ka badan 5 milyan oo soo degsasho ah, taleefankeena casriga ah ee Android waa in lagu maareeyaa Android 5.0 ama ka dib.
Developer: Waqtiga La Filayo
Mid ka mid ah codsiyada bilic ahaan ka sii qurux badan isha waa Yahoo Weather, Codsi na tusaya sawirada cajiibka ah ee magaalooyinka aan dooneyno inaan ku ogaano macluumaadka cimilada.
Codsigan ayaa na siinaya macluumaad cimilo faahfaahsan 10-ka maalmood ee soo socda, waxaa ku jira radar is-dhexgal ah, dayax gacmeed, kuleylka iyo khariidadaha cimilada iyo sidoo kale digniino cimilo muhiim ah.
Waxay na siisaa Qorrax soo baxa iyo qorrax dhaca animations iyo modules dabayl. Waxay kaloo ina tusaysaa dareenka kuleylka, dareenka qoyaanka, tusmada shucaaca ultraviolet-ka iyo boqolkiiba suuragalnimada roobab. Waxa kale oo ku jira aalado-shaashad-shaashado ah, inkasta oo xulashooyinka habayntu aysan aad u sarreeyn.
Cimilada Yahoo, oo leh in ka badan 10 milyan oo soo degsasho ah ayaa loo heli karaa soo dejinta gebi ahaanba bilaash ah waxaana ku jira xayeysiis, laakiin ma ahan ikhtiyaarka ah in laga saaro iyaga oo isticmaalaya iibsashada abka.
Codsi kale oo leh a naqshad aad u soo jiidasho leh Waxaan ka helnaa Klara, oo ah codsi na tusaya macluumaadka cimilada iyada oo loo marayo garaafyo si fudud loola tashado. Klara waxay na siisaa macluumaad ku saabsan heerkulka, dusha sare ee daruuraha, xawaaraha cimilada, cadaadiska jawiga iyo huurka.
Codsiga wuxuu noo ogolaanayaa inaan kala doorano 4 mawduuc oo kala duwan, wuxuu leeyahay widget shaashadda guriga, kuma jiraan xayeysiis waxaana loo heli karaa soo dejisan gebi ahaanba bilaash.
Developer: Xulka wararka oo dhan
Haddii aan ka hadalno codsiyada cimilada, waa inaan ka hadalnaa Channel-ka Cimilada, mid ka mid ah codsiyada horeWaa hagaag, halkii mid ka mid ah adeegyadii ugu sareeyay ee saadaalinta hawada adduunka.
Weather Channel ayaa na siiya digniinta cimilada lama filaanka ah, macluumaadka cimilada ee aaggeenna waxayna bixisaa warbixinno sax ah oo ku saabsan cimilada 15 maalmood ee soo socda ...
Codsigan ayaa na siinaya 5 hawlaha ugu waaweyn:
Waqtiga goobteenna iyo kuwa aan u dejinnay sida kuwa ugu cadcad, oo leh tirakoob iyo muuqaallo ku jira waqtiga dhabta ah.
Nidaamka isdiiwaan gelinta digniinta ah ee loo maro ogeysiisyada riixa.
Isbedelada cimilada ee noo ogolaanaya inaan raacno isbedelka cimilada saacadaha iyo maalmaha soo socda.
Digniinta cimilada ee daran sida onkodka ama barafka.
Macluumaad dhammeystiran oo ku saabsan xawaaraha dabaysha iyo isbeddelkeeda oo ah qaab duufaanno ama ifafaaleyaal kale oo hawo leh.
Kanaalka Weather ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo nidaamka isdiiwaangelinta billaha ah si looga takhaluso oo loogu raaxeysto dhammaan howlaha ay na siiso. Iyada oo ku dhowaad 2,5 milyan oo la soo dejiyey iyo qiimeyn celcelis ahaan 4,6 xiddigood oo ka mid ah 5 macquul ah, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee laga heli karo suuqa.
Cimilada - Kanaalka Cimilada
Developer: Weather Channel The
cunt in ka badan 100 milyan oo soo degsasho ah, waxaan ka helnaa AccuWeather, codsi celcelis ahaan 4,2 xiddigood 5 ka mid ah XNUMX macquul ah oo aan si bilaash ah ugu soo dejisan karno, oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka si loo baabi'iyo.
AccuWeather waxay na siisaa taxane widget ah oo aan dhigno shaashadda guriga oo aan awoodno ogow heerkulka, xawaaraha dabaysha iyo huurka markaad jaleecdo iyo inaan sidoo kale u habeyn karno si aan u tusno macluumaad badan ama ka yar. Waxay na siisaa macluumaad ku saabsan cimilada 15ka maalmood ee soo socda, waxay na siisaa helitaan fiidiyowyo leh isbeddelka waqtiga saadaasha.
Waxaa ku jira codsi loogu talagalay Wear OS, sidaas darteed haddii aad haysato smartwatch oo leh nidaamkan hawlgalka, waxaad ku raaxeysan kartaa nooc ka mid ah dalabka curcurkaaga.
AccuWeather: Saadaalinta & Digniinta Cimilada
Cimilo Xad dhaaf ah
Hadaad jeceshahay wijidka, dalabka aad raadineyso inaad ku ogaato cimilada hada jirta iyo tan mustaqbalka waa Overdrop, waa codsi noo ogolaanaya inaan ku darno tiro badan oo wijetarada shaashadda guriga oo leh macluumaadka sida aadka ah noo daneynaya cimilada, taariikhda aan hel, cimilada hadda jirta iyo maalmaha soo socda, batteriga haray ...
Overdrop waxay na siisaa macluumaadka cimilada 24ka saacadood ee soo socda iyo 7da maalmood ee soo socda, waxaa ka mid ah habka digniinta, 5 mawduuc si loo habeeyo muuqaalka waxaana loo heli karaa soo dejisan gebi ahaanba bilaash oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka si looga saaro.
Cimilada Xad dhaafka ah - Saadaasha iyo Widget-ka Animated
Haddii aad horey u isticmaashay iPhone, waxaad u badan tahay inaad taqaanid barnaamijka Karootada, mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee ku saabsan macruufka si aad u ogaato macluumaadka cimilada oo faahfaahsan iyo mid ka mid ah saadaasha ugu fiican ee la bixiyo.
Codsiga waxaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo nidaamka isdiiwaangelinta billaha ah si aad awood ugu yeelatid helitaanka dhammaan macluumaadka dalabku na siinayo marka lagu daro baabi'inta xayeysiiska.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 10ka barnaamij ee cimiladu ugu fiican tahay Android
Labaad 20mg dijo
Para mi la mejor por su eficacia y fiabilidad (y con mucha diferencia sobre el resto) es Eltiempo.es.
Ku jawaab Bilaxten 20mg
8-da kulan ee ugu fiican ereyga ereyga 'Android'
Gboard ma shaqeynayo: dhammaan xalalka lagu xalliyo dhibaatadan